Izicabucabu Russia kuhluke ezihlukahlukene eside. It knitters, amahhashi, Araneus, Tarantulas, kanye nezinye izinhlobo eziningi ezifanayo abazithandayo. Ngenhlanhla, isihlungu kubo ezingajwayelekile kakhulu. Kodwa noma kunjalo, ngaso sonke isikhathi kancane futhi ngezinye izikhathi ababaningi kakhulu umhlaseli ngokomzwelo wemvelo ubambe amateki. Ngakho yeka ukuthi uyiqiniso kanjani ukwesaba kwethu? Kungaba ngcono ukuze ufunde kabanzi mayelana ezinye izinhlobo izicabucabu ezenzeka ezweni lethu. Bese sifinyelela iziphetho.
Lezi izicabucabu baye basakaza yonke indawo. Cishe kuyo yonke esifundeni, kukhona umbono wonke amagumbi zwe. Igama endlini spider wamupha ngengozi. Into ungubani, bancamela ukuba bazohlala endaweni yokuhlala, futhi cishe wahlala nathi ngapha nangapha. Njengomthetho, iwebhu yayo lolu hlobo izindawo Nooks, lapho abazange bakuqaphele futhi ngeke akhukhulwe: I-izingubo zokugqoka, eliseceleni kombhede amatafula e emakhoneni amnyama. Cobweb, ngezinye izikhathi elenga ophahleni, ubuqambi yabo kungokwalabo. Ngokusho isakhiwo se-goblin ukudoba inethiwekhi spider liyafana uphondo. Ziyakwazi njalo futhi ngempela eziqinile, futhi phakathi ekhosombeni, uhlobo imbobo, okuyinto spider ekhaya. Kube uphumule, elinde isinambuzane babanjwa kuwebhu. Njengoba for ukwakhiwa amakhono ayo, izindlu ezincane Spider kabusha inethiwekhi entsha nje ngosuku, uma ukuxubha kude umshanelo ubudala. Ngezinye izikhathi kungaba sikhule bale zinhlobo mikhulu - kufike ku-20 mm ngaphandle izinyawo ubude. Lokhu kwenzeka uma indlu eziningi izinambuzane, izimpukane omiyane, futhi kungakho - semali ukudla nomzingeli vosmilapogo. Kodwa ubukhulu evamile yendlu spider ingeqi 10 mm.
It is waphawula ukuthi umsindo umculo izicabucabu enjalo ezikhethiwe kusuka izindlu futhi baqala "ukudansa" ku imicu kuwebhu. Cha, ongakaphathelani ukunambitheka kwabo zomculo. Into wukuthi imisindo kubangele inethiwekhi ukudoba ehla enyuka, futhi umhlaseli enquma ukuthi is othile kuzibamba. Lapho kuvela ukuthi isicabucabu ayinalutho, isicabucabu uzama nivuthulule isinambuzane wakhe phantom.
Ngaphambili, ngo-ukuziphatha endlini izicabucabu abantu sibikezele isimo sezulu, ngoba lezi zinambuzane Akumangalisi nozwelo izinguquko kancane kukhona. Okhokho bethu wayebethemba ngokuphelele futhi ungalokothi okungalungile. Akwaziwa ukuthi, kodwa isicabucabu uyazi uma lizona, futhi uma ngosuku olucwathile. Ngaphambi sezulu esinamafu efika ku emgodini yayo, futhi ihlala khona bezvylazno. Esimeni sesibili, kunalokho, ephuma futhi benza abakuthandayo - ubabonisa futhi kuqinise webs zabo, imifece udonsa.
Lokhu amanzi okwandile izicabucabu eRussia, okuyinto zitholakala ngokuyinhloko engxenyeni European wezwe zethu. Ngu indlela yokuphila kuyigugu esiyingqayizivele. Kuyinto kuphela zama-izicabucabu, ngubani ephethwe ukujwayela ukuphila emanzini. I izindawo esemqoka yalolu zinhlobo amanzi ukuma, kodwa itholakala labo wamanje ababuthakathaka likhona. Swimming spider isebenzisa zonke izitho, ngaphezu, ngokuhamba kwemvelo le spider eseke isandiso imilenze yawo yangemuva, esisebenza ngezinga isimiso Izigwedlo. wonke umzimba silverfish, ikakhulukazi esiswini, embozwe izinwele ezincane. Bayabambelela air Bubbles lapho kwamanzi emanzini, ngakho isicabucabu kubonakala silvery. Yingakho igama. Lobu ubufakazi obubodwa nje we izicabucabu, okungaba isikhathi eside kakhulu ngaphansi kwamanzi. Serebryanka isakhiwo lapho Dome emoyeni, anamatheliswe kunoma umuphi isitshalo noma Snag. Kube nomzingeli ziphumule, kuheleza Idla izinambuzane ethumba ngaphansi kwamanzi. Ukuze ukwakha Dome ezinjalo, kudingeka kuqala ukuba sifake a web of ukuma ezifanele bese ngesineke usigcwalisa air Bubbles. Ngo ezinkulu usayizi spider ibhaluni kungenzeka nenkundla hazelnut. Thanda izihlobo kakhulu, silverfish zibhebhetheka ukudoba inethiwekhi, kodwa zikwenza lokhu ukuze ngaphansi kwamanzi. Njengakwamanye izicabucabu, ke ubamba inyamazane ubanjwe umfece of cobwebs.
Kuyathakazelisa ukuthi kunabesilisa serebryanok makhulu kakhulu kunalokho nabesifazane. (15 mm 11 mm, ngokulandelana) ezinhlotsheni eziningi zezinto eziphilayo nje okuphambene. Ubuzimu kuvamile kwamanye Izicabucabu lolu hlobo akuyona ovamile. Abesifazane kanye nabesilisa ukwakha ngokuphepha izindlu zabo eziseduze. Njengoba inzalo, Izicabucabu kancane ziboniswa ngaphansi kwamanzi ngaphansi kokuqondisa unina, futhi okokuqala bahlala umfece air.
indlela nelukuluku ubusika serebryanok. Nge kusondela kubanda, izicabucabu ngifuna igobolondo ezingenalutho futhi usigcwalisa emoyeni, kangangokuthi umbelethisi antantayo emanzini. Zafika lapho, zatholana babiza duckweed igobolondo futhi ngokuphephile unamathelise inkambo isitshalo izicucu. Kuyaziwa ukuthi duckweed ekwindla olubi phansi, futhi nalo ubusika "ekhaya" isicabucabu. Spring isitshalo futhi livela phezu, ngiphakamisa nge igobolondo. Ebusika, jewel ungaphakathi kulala kwasebusika, efana Cryostasis: ukuphefumula kubambezela, nemilenze namanje simisiwe. Kuleli zinga, akadingi omningi, futhi isicabucabu abangaphila ngendlela evumelana uma kuncibilika iqhwa.
uhlobo lolwembu olunesihlungu South Russian
Lezi izicabucabu azisenzeki eRussia yonke indawo. Habitat uhlobo lolwembu olunesihlungu ububanzi emngceleni izindawo eningizimu ezishisayo. Babuye sitholakala e-Asia Ephakathi. uhlobo lolwembu olunesihlungu South Russian uhlala ikakhulukazi ezindaweni ezinesomiso: emaqeleni, ezingwadule futhi semi ezingwadule. Ngokuvamile, uhlobo lolwembu olunesihlungu has a umbala obomvu, kodwa umbala kungaba nhlobonhlobo ukuze nsundu, kuye ngokuthi izimo zemvelo. Akenzi spin webs njengabanye izicabucabu. Ekuzingeleni zilwane uncika ijubane impendulo yabo. Tarantulas ukwakha Burrows elincane phansi noma isihlabathi, okuyinto uhleli ulindile inyamazane. Lapho umuntu ezama ukuba ufunde emgodini noma imingcele, umhlaseli kuzuba futhi uhlasela umhlaseli. Ukwazi lesi sici, abantu beveza indlela ezithakazelisayo ukubamba Tarantulas. Ngesikhathi kuqothwa ukuze isicabucabu bacwilisa wax noma plasticine ibhola kuboshelwe yezinhlamvu. Ngu ehlasela ukukhiqizwa zokukhwabanisa, isinambuzane ubhajwe in ngezidladla yakhe, ngemva kwalokho-ke kungaba ngokukhululekile yokutakula ukukhanya. Kodwa ngokuqinile hhayi Kunconywa bakugcone uhlobo lolwembu olunesihlungu. Elikhulu, ikakhulukazi abesifazane (kufika ku 4 cm, ngaphandle imilenze), lezi izicabucabu ungakwazi ukugxuma bese luma umfutho omuhle. Akukhona lokho kuphela, bite kuba buhlungu kakhulu (ifaniswe a Udosi bee, kokubili ingqondo nemizwa), kanjalo kungabangela ukusabela iguliswa yingozi. Nakuba ngokwako isihlungu lolu hlobo spider akuyona sibulala abantu. Kuze kube manje, kuye kwaba akukho ababulawa bite.
Igama elithi "uhlobo lolwembu olunesihlungu" livela edolobheni medieval e-Italy - Taranto. Kwakukhona izicabucabu eziningi esifana zilwane wethu, kodwa izinto kakhudlwana futhi ezinkulu. Ezinsukwini ubudala kwakucatshangwa ukuthi bite yale ndoda spider nezingozi ukulahlekelwa ingqondo. A wokutakula can kuphela kuncike umdanso ahlanye le tarantella. Futhi ngaphezu kwakho konke ekwenzeni lokhu umdanso babe nekhono lavelaphi Taranto.
uhlobo lolwembu olunesihlungu South isiRashiya ubuzimu esingokwemvelo. Ngenxa yalokhu, abesilisa thukela ukuphila ngokuvumelana ebusika, kuyilapho izinsikazi bangaphila iminyaka eminingi.
izicabucabu ezinesihlungu Russia akanayo ezihlukahlukene omkhulu zinhlobo, ezifana emazweni ibavuthela, kepha thina singabafundi abameleli ukwesaba kakhulu. Lezi zihlanganisa ayingozi kakhulu Black Widow. Lokhu spider ingenye enobuthi kakhulu, hhayi nje kuphela ezweni lethu kodwa futhi phesheya. eduze kwakhe isihlobo - Black Widow, okuyinto eheha ukwesaba okunjalo kubantu Melika. Kodwa spider yethu Isihlungu aqinile. Karakurt ezitholakala ezifudumele eningizimu yezwe, eNorth Caucasus, Astrakhan futhi Orenburg esifundeni. Kodwa eminyakeni ashisayo ikakhulukazi ozibone of izicabucabu ngisho nesifunda eMoscow zalotshwa. Abesifazane lokhu nomzingeli ongafinyelela 20mm ubude ngaphandle ubude tines. Basuke ibhekwa njengeBhayibheli usongo olukhulu ukuze abantu, ngoba abesilisa ezincane ezimweni eziningi, abakwazi ukuluma ngokusebenzisa isikhumba sethu. umbala komzimba black spider, esiswini likhulu kakhulu futhi kungaba izindawo njengoba eliqhakazile obomvu noma orange. Kodwa kukhona izicabucabu futhi ngaphandle kwalezi mshini isixwayiso. Isici esiyinhloko okungase kunqunywe karakurt, esisogwini underside isisu sakhe. Kukhona sibalo okhanyayo, okuyinto ufana hourglass (njengoba ababethi umbala njengoba sicoco).
Of basengozini enkulu ngokukhethekile yilona zesifazane Black Widow ngesikhathi yokuzalela - kusuka ekuqaleni kuka July kuya ngasekupheleni kuka-September. Ngalesi sikhathi, le izicabucabu uthuthe ngobuningi. Befuna indawo yokuhlala, bavame ukukhasa endlini yaleyo ndoda. Bese kungenzeka, isibonelo, ngaphansi izingubo, lapho kungaba ngephutha noma uvalo ukuba athunge phansi, bese angikwazi ukubalekela izinkinga. Ukulunywa ayikanye ebuhlungu kakhulu, asikhumbuza inaliti umjovo. Kodwa lapha imiphumela zimbi kakhulu: kuqala ubuhlungu obuhlabayo endaweni lapho kwakukhona khona yizinyoka, bese imisipha, ikakhulukazi esiswini nasesifubeni, esitho ndikindiki ukuhlanza reflex. Uma kungenziwa lutho, isisulu ingaphazamisi ukwazi, ikhoma nokufa ukulinda. Ngenhlanhla, ama-serum ngokumelene bite karakurt khona. It is ibuye Kunconywa ukuluma ngokushesha cauterize komdlalo. Ukuchayeka ukushisa uyobhubhisa iningi ushevu yingozi futhi ngeke lona seep lingene egazini. izicabucabu Russian lingama-non-enobungozi, kodwa akunakusetshenziswa akufanele kube izinto kalula, uma uphawula izici isinambuzane nobuntu Black Widow.